सामाजिक Archives - Page 18 of 38 - khabarbox.com.npkhabarbox.com.np
प्रहरीको गोली प्रहारबाट म्यादी प्रहरीको मृत्यु
Posted On December 22, 2017 Author siteadmin Category सामाजिक.
कालिकोट- प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कालिकोटमा एक जना म्यादी प्रहरीको ज्यान गएको छ। तलबमा अनियमितता भएको भन्दै म्यादी प्रहरीले आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनमा रहेका म्यादी माथी गोली चलाउँदा शुक्रबार दिउँसो रासकोट नगरपालिका २ घर भएका म्यादी प्रहरी विवेक ऐरीको ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेटमा नै उनीमाथी गोली प्रहार भएको थियो। source nagariknews
Posted On December 20, 2017 Author siteadmin Category सामाजिक.
पुस ५, २०७४-वीरगन्ज महानगरपालिका–२२ मा पर्ने सुखसैनामा रहेको सुपर ग्यास उद्योगमा भीषण आगो लागेको छ । बिहान ६ बजेदेखि आगलागी भएपनि यो नियन्त्रणमा आएको छैन । आगो निभाउन गएको दमकल आफैं आगोको चपेटामा परी जलेको छ । आगलागी भएसँगै त्यहाँ पुगेको विरगन्ज महानगरपालिकाको एउटा दमकलले आगो निभाउने प्रयास गरेको थियो तर आगो निभाउन गएका २… Read more »
कांग्रेसमा कसले गर्‍यो अन्तर्घात ? महर्जनले [ कांग्रेस प्रदेशसभा उम्मेदवार ] गरे सनसनीपूर्ण खुलासा
Posted On December 17, 2017 Author siteadmin Category सामाजिक.
कांग्रेसमा कसले गर्‍यो अन्तर्घात ? महर्जनले [ कांग्रेस प्रदेशसभा उम्मेदवार ] गरे सनसनीपूर्ण खुलासा Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cF4GIpXOcKk
थेच्वमा नयॉ शक्ति र कॉंग्रेस कार्यकर्ताबाट ब्यानर,झणडा र प्रचार सामाग्री सफाइ कार्यक्रम
Posted On December 15, 2017 Author siteadmin Category सामाजिक.
थेच्व- नयॉ शक्तिको उम्मेदवार आफै र वडा अध्यक्षको सकृयतामा आज थेच्वमा नयॉ शक्ति र कॉंग्रेसले चुनावमा राखेको झन्डा निकाल्न सुरूवात गरियो। हाम्रो गॉउ हामी आफै मिलि सफा राखौं।
नेवार समुदायका पुराना घरका मूलढोका होचा हुन्छन् किन ?
Posted On December 13, 2017 Author siteadmin Category सामाजिक.
उपत्यकामा नेवार समुदायका पुराना घरका मूलढोका होचा हुन्छन् । मुख्य नेवारी बस्तीका प्रवेशद्वार पनि होचै हुन्छन्। यस्ता घर र टोलभित्र प्रवेश गर्दा र निस्कँदा टाउको निहुराउनुपर्छ । मल्लकाल र त्यसअघि बनेका अधिंकाश घरको ढोका होचै हुन्छन् । नेवार समुदायका घर र टोलको मूलढोका होचो बनाउनुको कारण भने अनौठो तथ्यसँग जोडिएको छ । पहिले–पहिले राजाहरू नेवार… Read more »
पार्टी कार्यकर्ताबाट ब्यानर,झणडा र प्रचार सामाग्री सफाइ कार्यक्रम
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय जीवन राम श्रेष्ठ र प्रदेश सभा सदस्य राजेश शाक्य तथा पार्टी कार्यकर्ताबाट ब्यानर,झणडा र प्रचार सामाग्री सफाइ कार्यक्रम ।।
मतगणना चलिरहँदा गयो भूकम्प
Posted On December 8, 2017 Author siteadmin Category सामाजिक.
काठमाडौं । देश भर प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको मतगणना जारी रहेका वेला भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । शुक्रबार विहान ८ बजेर ३६ मिनेटमा काठमाडौं लगायत आसपासका जिल्लामा भूकम्प गएको हो । भूकम्पको केन्द्रविन्दू कहाँ भन्ने आउन बाँकी छ ।
मह जोडीको नाममा भ्रम पुर्ण प्रचार
Posted On December 2, 2017 Author siteadmin Category सामाजिक.
केहि दिन यता सामाजिक सञ्जालमा केहि पार्टीका केहि नेताले मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिबंश आचार्यको साथ समर्थन हामीलाई छ र मह जोडीले फलानो लाई भोट दिनु भनेर माग्नु भएको छ भनेर गरिएको भ्रम पुर्ण प्रचार प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले कसैको पक्ष वा बिपक्षमा प्रचार प्रसार गरेका छैनौ र भोट मागेका पनि छैनौ… Read more »